कुटनीतिक पहल आवश्यक राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफू सँग भएको सहमति र सम्झौता बारे रहस्य खोल्न चुप किन ? « Pariwartan Khabar
कुटनीतिक पहल आवश्यक राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफू सँग भएको सहमति र सम्झौता बारे रहस्य खोल्न चुप किन ?
14 December, 2020 10:29 am
राकेश कुमार शर्मा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तत्काल श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र शाहले आफू संग भएको सहमति र सम्झौता बारे रहस्य खोल्ने समय आएको छ ।
कुटनीतिक पहल आवश्यक राजा ज्ञानेन्द्र शाह चुप किन रु राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफू सँग भएको सहमति र सम्झौता बारेको रहस्य पर्दाफास गर्ने समय आएको छ । अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहले रहस्य बारे मुख खोल्नुपर्छ । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वास्तविकता र सत्य तथ्य बारे पर्दाफास गर्नुपर्छ ।
विक्रम सम्वत २०४७ सालको संविधान जीवित छ । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाली जनताहरुले पुनः राजगद्दीमा ल्याएर राख्लान भन्ने भ्रममा नपर्नु होला भन्ने मेरो आग्रह छ । मुलुकमा जनताहरु छन भन्ने कुरामा भर पर्नु भयो भने सय वर्षमा पनि नेपालमा राजसंस्था फर्कन्न हाम्रो मुलुक नेपालमा वास्तविक जनताहरु नै छैनन । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु छन । राजाले यसरी सजिलैसँग सत्ता छोडेको इतिहास नेपाल बाहेक कतै पनि छैन ।
मुलुकमा जनताहरु भएको भए पो राजाको महत्त्व र योगदानलाई कदर गर्थे ? राजाको पालामा मालपोत तिर्नु पर्दैन थियो । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्नु पर्दैन थियोे । सांसदहरूको संख्या अधिकतम २०५ भन्दा बढी थिएन ।
अहिले संघीय संसद र प्रदेश संसद गरी ८८४ जना सांसदहरूको संख्या छ । मुलुकमा जनताहरु भए पो यी कुराहरू समझमा अर्थात दिमागमा आउँथ्यो ? राजाको परिवारहरुले खाएको सहन भएन तर अहिले ८८४ जना सांसदहरूले राज्यकोष ढुकुटी ब्रहम्लुट गरेको कसैले देख्दैनन ? मुलुकमा जनताहरु भए पो ?
राजा ज्ञानेन्द्र शाह ज्यु लाई मेरो सुझाव र सल्लाह हाम्रो मुलुकमा जनताहरु छन र जनताहरुले राजगद्दीमा बसाली देलान भन्ने भ्रममा पर्नु भयो भने सय वर्षमा पनि मुलुकमा राजसंस्था फर्कन सक्दैन असम्भव छ किनभने नेपालमा वास्तविक जनताहरु नै छैनन । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजदरबार छोडनु भन्दा पहिले पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएको संदेशको दृश्य हेर्ने हो भने नियम, ऐन र कानुन बमोजिम विक्रम सम्वत २०४७ सालको संविधानको अन्त्य भएको छैन ।
विक्रम सम्वत २०४७ सालको संविधान जिवित छ । यसकारण राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई जिम्मा दिएको नासो तत्काल कुटनीतिक प्रयास मार्फत फिर्ता लिने समय आइसकेको छ । यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू संग भएको सहमति र सम्झौता बारे तत्काल मुख खोल्नुपर्छ ।